Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → août → 10 → Toamasina : Nisy naka an-keriny ny tompon’ny tranombarotra “Fibasom”
Tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany alina, ny alakamisy 08 aogositra, dia niverina nitranga teto Toamasina indray ny fakana an-keriny teratany karana. Raha hamonjy fodiana ity teratany karana iray tompon’ny tranombarotra “Fibasom” Bazary be izay eo amin’ny 60 taona eo, no avy hatrany nosakanan’ny andian-jiolahy efatra nitondra fiara teo akaikin’ny trano fandraisam-bahiny “le generation” amin’ny Bd Joffre.
Ny fiara tsy mataho-dalana nentin’ilay karana ihany no nitondran’ireo andian-jiolahy nirongo basy azy nandositra. Raha vao naheno ny fisehoan-javatra ny mpitandro ny filaminana, satria tena haingana ny fampitam-baovao nataon’ny fianakaviany sy ny manodidina, dia nanao ny fanarahan-dia sy nanao sakan-dalana samy hafa avy hatrany tamin’ireo lalana mivoakatra sy miditra an’i Toamasina, sy mandalo amin’ireo lalana fandosiran’ireo andian-jiolahy mpanao fakana an-keriny hatramin’izay. Tapi-dalan-kaleha ireto andian-jiolahy, noho izany, dia navotsotr’izy ireo teny an-dalana miazo ny lalam-pirenena faha-02-Bis ilay teratany karana sy ny fiara nentiny tokony ho tamin’ny 10 ora alina tany ho any, ka lasa nitsoaka amin’ny fiara izay nentiny ireto andian-jiolahy ireto. Efa tafaverina amin’ny fianakaviany ilay teratany karana manodidina ny 60 taona amin’izao, ary efa manao ny asa aman-draharahany ara-barotra koa nanomboka omaly zoma.
Hatreto aloha dia mbola tsy nisy tratra ireo voalaza fa andian-jiolahy nikasa hanao fakana an-keriny karana teto Toamasina ireto, saingy eo am-pikarohana azy ny mpitandro ny filaminana amin’izao arakaraka ny angom-baovao azon’izy ireo. miverina mailo ka manangana ny andrimasom-pokonolony ihany koa izao ireo teratany karana eto Toamasina, ho fiaraha-miasa amin’ny mpitandro ny filaminana raha miverina indray ny fakana an-keriny, amin’ny fampitana ny vaovao farany izay haingana.